LT-800T Chinyorwa Wiricheya - Karman Healthcare kupeta yakapfava
×	 KN-922W - 49 lbs	1 × $544.00
View ngoro "KN-922W - 49 lbs" yakawedzerwa kungoro yako.
LT-800T Chinyorwa Wiricheya
Yakawanda Karman isingaremi inotakurika wheelchair inouya nemhando yepamusoro yakavakirwa muzvizvarwa zvakawanda zvekusimudzirwa uye nekuvandudzwa kunoramba kuchienderera apo isu tichiedza kupa kukosha uye mutengo pazvinhu zvakanaka zvinogoneka kune vese vatengi. LT-800T yemanheru inorema wiricheya huremu huremu uye inotsigira uremu mitoro inosvika mazana maviri emapaunzi uchisara nemakwikwi mitengo.
Iyi yakasimba yakavimbika, yakajeka wiricheya uye imhepo yekufambisa. Yakavakwa kuti igare uye yakatoratidza pachayo mukuyedza kwenguva ichishandiswa munhandare zhinji nezvipatara. icha chengetedza kutaridzika kwayo kwakanaka neyakagomara sando toni kupera.
Zvimwe zvezvinhu zvikuru zvaunowana pane ino yuniti zvinosanganisira yayo yekumisikidza armrest uye yekumisidzana-kure tsoka yekumakumbo ichiita kuti zvive nyore nyore kupinza mukati nekubuda pawiricheya uye nyore kwekuwana matafura uye kumwe kushandiswa kweichi chiitiko. Chikwata ichi chakanyatsogadzirwa nylon upholstery chiri nyore kupeta. Unogona kuripeta mumasekondi; zvichiita kuti ive sarudzo hombe kune ari kuenda mushandisi. Iyo nyaradzo inonyatso kuvakwa muchigaro ichi ichipa yezuva rese nyaradzo uye tsika inogadzikiswa tsoka.
Zvimwe zvezvinhu zvinozivikanwa zvinosanganisira akasimba ematairi emahara emahara ayo anotasva mushe uye haatombo gwadama. Ivo akakwana kumatenga mazhinji.
Mazhinji Karman akaenzana uremu wiricheya anouya nemhando yepamusoro yakavakirwa muzvizvarwa zvakawanda zvekusimudzira uye nekuenderera mberi nekuvandudza apo isu patinoyedza kupa kukosha uye mutengo pane zvakanakisa zviripo kune vese vatengi.
hapana 16 ″ x16 ″ 18 ″ x16 ″
hapana Yakajairwa - Swing Kure Kukwidza (+ $ 60.00)
hapana 18 ″ x17 ″ Seat Chiyeuchidzo Furo 2 ”pamutsago (+ $ 219.00)	16 ″ x17 ″ Seat Chiyeuchidzo Furo 2 ”pamutsago (+ $ 219.00)	18 ″ x16 ″ Chigaro cheFoam Cushion (+ $ 72.00)	16 ″ x16 ″ Chigaro cheFoam Cushion (+ $ 72.00)	18 ″ x16 ″ Chigaro Gel Cushion (+ $ 98.00)	16 ″ x16 ″ Chigaro Gel Cushion (+ $ 98.00)
hapana 18 "Wide Yekuyeuka Furo 2" Kudzoka Kusheni (+ $ 189.00)	16 "Wide Yekuyeuka Furo 2" Kudzoka Kusheni (+ $ 189.00)	18 "Wide Back Foam Cushion (+ $ 49.00)	16 "Wide Back Foam Cushion (+ $ 49.00)
LT-800T - 34 lbs huwandu
SKU: LT-800T Categories: Wiricheya isingaremi, Mawiricheya akajairwa Tags: wheelchair isina mwero, wiricheya, mavhiripu
Yakagadziriswa / Yakashongedzwa yakazara armrests ine chiwanikwa padivi gadhi
Kufamba-kure / Kureba zvigadziriso zvetsoka zvine chitsitsinho chiuno chetsoka
24 ”Flat yemahara polyurethane matai ekumashure
8 ”Flat yemahara kumberi casters
Yakakwira-giredhi / Yakapetwa nylon murazvo unodzora upholstery
Ruvara rweRudzi: Sirivheri Tsinga
HCPCS Kodhi K0003*
Chigaro Kureba 16 padiki, 18 padiki.
Pakazara Hupamhi Hupamhi 22 padiki, 24 padiki.
Kurema Pasina Riggings 34 lbs.
Kutumira Kukura 33, L x 37, H x 12, W
Nekuda kwekuzvipira kwedu mukuenderera mberi nekuvandudza, Karman Healthcare inochengetera kodzero yekuchinja maratidziro uye dhizaini pasina chiziviso. Kupfuurirazve, kwete ese maficha uye sarudzo dzinopihwa dzinoenderana neese magadzirirwo echiedza wiricheya yemawoko
LT-800T wiricheya yemawoko UPC #
32 × 13 × 37 mukati